बाँके, माघ ४ : १० रुपैयाँमा खाना ! त्यो पनि आजको महँगो समयमा? असम्भव लाग्ने काम सम्भव गराएका छन्, नेपालगञ्ज सदरलाइनका नरेश अग्रवालले। बालाजीका भक्त अग्रवालले व्यवसायबाट ‘रिटायर्ड’ पछि गत कात्तिकदेखि १० रूपैयाँमै खाना दिने पुण्य काम गर्दै आएका छन्।
सदरलाइनस्थित नगर भवनअगाडि मङ्गलबार र शनिबार ‘मेस’ चलाएर १० रूपैयाँमै एक छाक खाना बाँड्ने गरिएको छ। पाँच सयसम्म सर्वसाधारण खाना खान पुग्छन्। “आफूले कमाएको पैसा महँगो खानाको जोहो गर्नै मुस्किल पर्नेलाई राहत त दिएको छ नै, खानाकोे गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने भएका कारण अरू पनि खाना खान पुग्छन्, खानामा भात, दालका साथै मिठाई पनि दिइन्छ”,उनले भने।
६९ वर्षीय अग्रवाल नेपालगञ्जका परिचित व्यवसायी हुन्। उनले २०५० सालदेखि रामदूत स्टेशनरी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। लामो समयसम्म व्यवसायमा संलग्न रहेका अग्रवालले यतिबेला भने ‘रिटायर्ड’ जीवन बिताइरहेका छन्। “छोराहरु व्यवसायमै छन्, म पुण्यको कामतिर लाग्छु भनेर यो काम शुरु गरेको हुँ”, अग्रवालले भने। उनका जेठा छोरा आदेशले रामदूत प्रिन्टर्स सञ्चालन गरिरहेका छन्।
दुई दशकभन्दा बढी समय संघमा रहेका आदेश अहिले कोषाध्यक्ष हुन् भने आगामी माघ ११ गते हुने उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा उद्योगतर्फ उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनेका छन्। त्यस्तै कान्छा छोरा निखिल पनि व्यवसायमा छन्। उनलाई नेपालगञ्जका अरू प्रतिष्ठित व्यवसायीले पनि साथ दिएका छन्।
उनले शुरु गरेको काममा नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित व्यवसायी सञ्जय अग्रवाल, विजय गुप्ता, रञ्जीत लखेर, सञ्जीत ज्वेलर्सका साथ रहेको छ। अग्रवालले सबैको साथ र सहयोग पाए आगामी दिनमा यसलाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएका छन्। “यो पुण्य काममा सबैको साथ पक्कै रहन्छ”, अग्रवालले भने, “बाँचुन्जेल यस कामलाई निरन्तरता दिनेछु।” रासस
Published Date: Saturday, 18th January 14:37:19 PM